FAQ - Cannapresso Impilo Inc
CBD imfushane for Cannabidiol, ke ingenye ezivelele kunazo ngokwemvelo-okwenzeka cannabinoid ingxenye isitshalo insangu. Ngokungafani nomunye-molecule abadumile, tetrahydrocannabinol (iTHC), CBD ngokuphelele non-ingqondo futhi engalokothi enze uzizwe "okusezingeni eliphezulu". Nakuba CBD Lingenye yezindikimba cannabinoids angaphezu kuka-60 atholakala isitshalo insangu, izifundo eziningi zesayensi ziye wabonisa ukuthi CBD possesses the engaba enkulu oqabulayo zonke cannabinoids.
CBD kungenziwa etholakala Hemp nensangu. Zonke CBD yethu lisuselwa zemvelo, Hemp plant-based, okuyinto ngokomthetho wonke amazwe angu-50. CBD ethathwe Hemp amumethe zinzuzo ekwelapheni kanye zokwelapha, futhi ngokwemvelo ongaphakeme e iTHC.
Kuyini CBD isimiso?
Yini umahluko phakathi Hemp nensangu?
1. Plant Umehluko
Nakuba kokubili izitshalo ayingxenye zohlobo olulodwa, Hemp futhi insangu abanye umehluko omkhulu.
1) a.Hemp ikhula kufika ku-15 izinyawo ubude futhi has umoba omkhulu eside, it is kahle eduze phama ndawonye.
2). Insangu akuvamile idlula 5 izinyawo ukuphakama futhi ikhula phandle namahlamvu kakhudlwana futhi efihlekile, ngamunye ziintjalo nendawo enkulu ukuze utshale.
Kuzo zombili insangu Hemp, izinhlobo ezimbili cannabinoids ivelele: Tetrahydrocannabinol (iTHC) & Cannabidiol (CBD)
1) Hemp has ngokulambisa iyiphi iTHC nhlobo, nokuqukethwe isilinganiso phakathi 0.05-1%. Hemp iqukethe CBD ngaphezulu kwesilinganiso insangu isitshalo.
2) Izimbali i isilinganiso insangu isitshalo anamazinga iTHC ka 10-14%.
2) Amafutha Insangu iqukethe 50-60% iTHC, 10-15% enkabeni yedolobha.
4. Ukusetshenziswa kawoyela ngamunye
1) Hemp, nge CBD okusezingeni eliphezulu, ongaphakeme iTHC okuqukethwe, ngokuvamile asetshenziselwa eziphumulele, amafutha, opholile, ekusiza.
2) insangu, nge iTHC eliphezulu, ongaphakeme CBD okuqukethwe, ngokuvamile asetshenziselwa zokuzithokozisa kanye ingqondo.
CBD vs iTHC
CBD, iDemo cannabidiol, is a non-ingqondo chemical compounds e insangu, obhekene cannabises eziningi imihlomulo. Ngakolunye uhlangothi, iTHC, iDemo tetrahydrocannabinol, kwakwakhe ingqondo e insangu, okubangela "okusezingeni eliphezulu", ezihambisana nezindaba insangu, zingabantu ezimbili cannabinoids ahlukene ngokuphelele, okuyizinto isigaba zamakhemikhali.
ITHC cishe aziwa kakhulu ngokuba isithako ingqondo e insangu. CBD, Nokho, kuyinto non-ingqondo. Ngamanye amazwi, CBD awukwazi ukuthola wena okusezingeni eliphezulu. Nakuba ekudumazekeni kuya abasebenzisi ukungcebeleka, lesi sici eziyingqayizivele CBD eliyenza esikhangayo ngakho umuthi.
Odokotela bavame uncamela ukwelashwa nge sakugcina side effects, okuyinto eye yaba kube umgoqo omkhulu ukwamukelwa insangu yezokwelapha. Ngokufanayo, CBD iye yasetshenziswa ekwelapheni izingane ezincane ababephethwe izifo ezihlukahlukene.
ITHC aziwayo ukuthi abangela abanye abantu ukuba ukhathazekile noma Paranoid. Kodwa CBD okukholakala ukuthi kube nomphumela omubi. Eqinisweni, ucwaningo lubonisa ukuthi CBD usebenza simelane ukukhathazeka okubangelwa ngokudla amakhemikhali abulala iTHC. A inani lezifundo basikisela nokuthi CBD kunganciphisa ukukhathazeka lapho zaphathwa kwayona.
Ngaphezu kokuba non-ingqondo, futhi kubonakala sengathi CBD ukuba izakhiwo antipsychotic. Abacwaningi bakholelwa ukuthi CBD kungase kuphrojekthi abasebenzisi insangu ekutholeni abawasebenzisayo ngokunciphisa imiphumela sengqondo-like of iTHC. Nokho, olawula umsebenzi esishintsha engqondweni-of iTHC akukhona konke CBD muhle. Ngokwa, CBD uyahlolwa njengenhlangano imithi antipsychotic kubantu abane-schizophrenia.
Omunye imisebenzi ejwayelekile kakhulu insangu kuyinto njengendlela aid ubuthongo. ITHC okukholakala ukuthi unesibopho kakhulu imiphumela insangu engenasikhathi sokulala ngokuyenga. Ngakolunye uhlangothi, ucwaningo lubonisa CBD izenzo ukukhuthaza sihlale siphapheme, okwenza CBD kanti ukukhetha kabi umuthi ubuthongo. Imiphumela okuphambene CBD futhi iTHC ubuthongo kungenzeka kuyisizathu esenza abanye zakulezi abasebenzisi insangu imbangela ukuzizwa ozele kuyilapho abanye zaziwa lokuthuthukisa amandla.
5) Isimo Legal
Nakuba amazwe amaningi anemithetho eziqinile eziphathelene insangu iTHC, ngesimo esingokomthetho CBD akwaziwa kahle. E-United States, CBD ngokomthetho emthethweni ngoba ubhekwa njengesilwane esisengcupheni izidakamizwa Luhlelo mina ngaphansi komthetho sikahulumeni. Ifomu zemithi CBD, ngokuthi Epidiolex, isanda kuphela babeqoqa FDA ukuba zihlolwe izingane abanesifo sokuwa ezinzima.
Ngakolunye uhlangothi, CBD itholakala Hemp, okungase ngokomthetho amazwe futhi adayiswa e-US Ezinye izinkampani sasebenzisa lokhu maphutha ngokufaka oxhumana ephezulu CBD Hemp sicashunwa kwamanye amazwe lapho Hemp ikhiqizwa.
Ingabe ukhona yini umahluko phakathi Hemp CBD nensangu CBD?
"CBD kuyinto CBD-Akunandaba uvelaphi."
Yebo-ke kubaluleke. Imbali-eziqongweni namaqabunga alesi ezinye zezimboni Hemp zamagciwane ingase ibe umthombo iphila CBD (nezindaba zomthetho nakuba), kodwa Hemp neze umthombo kahle cannabidiol. Industrial Hemp ngokuvamile iqukethe cannabidiol kude esingaphansi insangu CBD-ocebile. izindodla Hemp zezimboni ziyadingeka kukhishwe esincane CBD, kanjalo ukhulisa ingozi contaminants anobuthi ngoba Hemp kuyinto "bio-accumulator" ukuthi udonsa izinsimbi ezisindayo enhlabathini. Single-molecule ye-CBD kuhlelwe ilebhu noma ukukhishwa futhi elicwengisiswe kusuka Hemp zezimboni sintula terpenes okwelapha ezibucayi futhi cannabinoids yesibili ezitholakala insangu zamagciwane. Lezi zinto zehlela uxhumana CBD futhi iTHC ukuthuthukisa izinzuzo zabo zokwelapha.
Kungani CBD kusemthethweni?
Ngokwe-2014 Ipulazi Bill esisayinwe UMengameli waseMelika uBarack Obama, Isigaba 7606 we 2014 Ipulazi Bill ogunyaziwe ukukhula kanye ukutshalwa Hemp zezimboni, okuyindawo CBD ifuna isusela.
Ukuze semthethweni CBD (cannabidiol), Umehluko omkhulu kuyinto iTHC level. Nakuba izihlahla insangu anezinga eliphakeme iTHC, Hemp iqukethe okuncane kakhulu amakhemikhali ingqondo, eliqukethe akukho kuka 0.3% iTHC. Lo mehluko wenza olulodwa yilokhu kakhulu ancike ukuhlukanisa Hemp yensangu.
Industrial Hemp Farming Isenzo 2013 - uchibiyela Izinto elawulwa Act ukubekela eceleni Hemp zezimboni kusukela kwencazelo "insangu." Ichaza "Hemp zezimboni" kuleli vesi lisho isitshalo insangu sativa L. futhi iyiphi ingxenye isitshalo enjalo, kungakhathaliseki ukuthi ezikhulayo noma cha, nge-delta nesishiyagalolunye tetrahydrocannabinol lokuhlushwa ezingekho ngaphezu 0.3 amaphesenti ku eyomile isisindo isisekelo. Elibona insangu sativa L. ukuhlangabezana lowo mkhawulo okuhlushwa uma umuntu eqhubeka noma icubungula ngezinhloso wokwenza Hemp zezimboni ngokuhambisana nomthetho wabantu bonke isimo.
DEA: "Ikhodi entsha izidakamizwa (7350) elisungulwe [uMthetho] alihlanganisi izinto noma imikhiqizo bayakhishwa kusukela kwencazelo insangu ezibekwe elawulwa Izinto Mthetho (CSA). Ikhodi entsha izidakamizwa kuhlanganisa kuphela labo ezikhishwe iwe ngaphansi kwencazelo CSA insangu ukuthi. Uma umkhiqizo Yayinesikhwanyana kuphela izingxenye zalesi sihlahla insangu ayifakiwe definition CSA insangu, umkhiqizo ofana nalo ngeze zifakwe ikhodi entsha izidakamizwa (7350) noma ikhodi kwezidakamizwa insangu (7360) "
Yiziphi izinzuzo CBD?
CBD (cannabidiol) inikeza nomkhakha ogcwele wezinto izinzuzo zezempilo ezitholakala insangu yezokwelapha kodwa ngaphandle imiphumela emibi iTHC. Ngo izilungiselelo emitholampilo CBD esiye ukusiza umdlavuza uswidi, khulula Ukudlikizela, ukuvuvukala, ukukhathazeka, isicanucanu, ukucindezeleka, ephansi umfutho wegazi, ubuhlungu bekhanda futhi abaningi ukukhathazeka ngempilo ngaphezulu. Eminye imibiko basikisela ukuthi lokuhlala eliphezulu CBD empeleni kungaba ngcono imiphumela ka iTHC. Nakuba singeke enze izimangalo njengoba imiphumela CBD, uwoyela Cannabidiol, noma amafutha Hemp CBD, thina abameli futhi bancome ukusesha ngokuzimela for izinzuzo CBD.
Ingabe ngithola "okusezingeni eliphezulu" kusukela enkabeni yedolobha?
Cha Imikhiqizo yethu Hemp extract konke okwenziwe kusuka Hemp zezimboni, okuyinto has kuphela ukulandelela imali iTHC, ngakho akukho nomphumela ingqondo ekuthatheni imikhiqizo yethu. Kuyinto iTHC okungukuthi ingxenye ingqondo ka insangu.
Yiziphi izinzuzo kusukela ukusebenzisa indophi?
Hemp iqukethe kakhulu ukubaluleka nutitional, ukuhlinzeka izingxenye ezibalulekile yokudla okunempilo ngokuthi Essential Fatty asidi Umzimba womuntu akusho ukukhiqiza ngokwemvelo, futhi kumelwe iyoshiswa ekudleni. Ngaphezu kwalokho, abasafufusa ucwaningo lwesayensi isekela ukusetshenziswa CBD uwoyela Hemp ngoba jikelele inhlalakahle kanye ikugcina enempilo, kodwa angawutholi wena "okusezingeni eliphezulu". Akukhona nje kuphela ukuthi Hemp nalesebentisa elikhula ngokushesha, cishe kuzo zonke izingxenye zalesi sihlahla isetshenziswa ekwakheleni - I-ukudla, fibre, izinto zokwakha kanye nophethiloli, futhi kulinganiselwa ukuthi 25,000 ukusetshenziswa. Hemp sequesters CO2 futhi ayidingi yokubulala ukhula ukuze baphumelele. Iphinde eshiya inhlabathi isimo ungcono ngaphambi kokuba itshalwe.
Uma uthatha ngokwanele, ngokuvamile kuphela kuthatha imizuzu 20-30 ngoba kusebenze. Abantu abaningi lapho kuqala uma usaqala, awazi yini ongayilindela ngokuvamile asiwanaki ukuthi isiqala ukusiza isimo sabo. Njengoba kungekho "okusezingeni eliphezulu" ukubika, abantu abaningi abazi ukuthi ukwenza noma yini. Kuphela emva kwesikhashana musa bayaqaphela ukuthi yini ubuhlungu kungenzeka ukuthi babekwenza ngezinhloso ayisekho khona noma cha okukhulu. I "umuzwa" kuyinto ezicashile ukuze ngokuvamile, konke uyakwazi abhekwe kuyinto ukuzola ezicashile. Ngemva ukusetshenziswa eziningana, abantu abaningi baye babika ukuthi manje babone ke "ukuthatha onqenqemeni" off imizuzu emva kokusebenzisa. Kodwa, zifiki kakhulu balindela noshintsho olukhulu futhi yayo nje kabanjalo, ngaphandle uma sisetshenziselwa ubuhlungu ukuphathwa. A ukukhululwa emnene of ubuhlungu ngokuvamile sasivumela obonakalayo uma nithatha mikhiqizo imali efanele.
Uma usebenzisa Vape Oil, indlela enza I azi kangakanani CBD sengiba?
Indlela abantu abaningi nihambahambe kulo iwukuba sibe igobolondo elilodwa anikezelwe Hemp yabo Vape Amafutha. Bona ukufaka igobolondo ungene vape yabo ipeni futhi ulisebenzise njalo usuku lonke. Ngokwazi lokuhlushwa CBD emafutheni vape ziyisebenzisa, bangakwazi ukubala malini CBD ungaphakathi igobolondo lapho uligcwalise. Ngokwesibonelo, yethu uwoyela vape has 25mg ka CBD 1.5ml lamafutha vape ngayinye. 1.5ml kuyimali ezivamile ukugcwalisa igobolondo (kodwa hhayi inani kuphela ..... ngakho ulungise ngokuvumelana igobolondo oyisebenzisayo). Ngakho, uma usebenzisa 100mg 10ml yethu uwoyela vape, uma umuntu efuna 20mg ka CBD, kwakuyodingeka vape a 2ml igobolondo ogcwele isikhathi ngasinye lapho belisebenzisa. Kodwa, futhi, kuye ngokuthi isikhathi esingakanani drag esiqhutshwa ngeke kuthinte kanjani CBD kakhulu empeleni singena emzimbeni womuntu.
100mg 1oml yethu ibhodlela: I Vape Amafutha has 10mg ka CBD ngamunye 1 ml amafutha vape. Ngakho, ngokwesibonelo, uma ufuna 10mg ka CBD ke Wawuthatha 1ml.
300mg 1oml yethu ibhodlela: I Vape Amafutha has 30mg ka CBD ngamunye 1 ml amafutha vape. Ngakho, ngokwesibonelo, uma ufuna 10mg ka CBD ke Wawuthatha 1 / 3ml.
500mg 1oml yethu ibhodlela: I Vape Amafutha has 50mg ka CBD ngamunye 1 ml amafutha vape. Ngakho, ngokwesibonelo, uma ufuna 10mg ka CBD ke Wawuthatha 0.2ml.
1000mg 1oml yethu ibhodlela: I Vape Amafutha has 100mg we CBD ngamunye 1 ml amafutha vape. Ngakho, ngokwesibonelo, uma ufuna 10mg ka CBD ke Wawuthatha 0.1ml.
100mg 15ml yethu ibhodlela: I Vape Amafutha has 20 / 3mg ka CBD ngamunye 1 ml amafutha vape. Ngakho, ngokwesibonelo, uma ufuna 10mg ka CBD ke Wawuthatha 1.5ml.
300mg 15ml yethu ibhodlela: I Vape Amafutha has 20mg ka CBD ngamunye 1 ml amafutha vape. Ngakho, ngokwesibonelo, uma ufuna 10mg ka CBD ke Wawuthatha 0.5ml.
500mg 15ml yethu ibhodlela: I Vape Amafutha has 100 / 3mg ka CBD ngamunye 1 ml amafutha vape. Ngakho, ngokwesibonelo, uma ufuna 10mg ka CBD ke Wawuthatha 0.3ml.
1000mg 15ml yethu ibhodlela: I Vape Amafutha has 200 / 3mg ka CBD ngamunye 1 ml amafutha vape. Ngakho, ngokwesibonelo, uma ufuna 10mg ka CBD ke Wawuthatha 0.15ml.
100mg 3oml yethu ibhodlela: I Vape Amafutha has 10 / 3mg ka CBD ngamunye 1 ml amafutha vape. Ngakho, ngokwesibonelo, uma ufuna 10mg ka CBD ke Wawuthatha 3ml.
300mg 3oml yethu ibhodlela: I Vape Amafutha has 10mg ka CBD ngamunye 1 ml amafutha vape. Ngakho, ngokwesibonelo, uma ufuna 10mg ka CBD ke Wawuthatha 1ml.
500mg 3oml yethu ibhodlela: I Vape Amafutha has 50 / 3mg ka CBD ngamunye 1 ml amafutha vape. Ngakho, ngokwesibonelo, uma ufuna 10mg ka CBD ke Wawuthatha 0.6ml.
1000mg 3oml yethu ibhodlela: I Vape Amafutha has 100 / 3mg ka CBD ngamunye 1 ml amafutha vape. Ngakho, ngokwesibonelo, uma ufuna 10mg ka CBD ke Wawuthatha 0.3ml.
Yini Mesh V +?
Qinisekani ngalokhu, imikhiqizo Sidayisa ezisemthethweni kuzo zonke States 50 futhi cishe 40 amazwe emhlabeni wonke. Akudingi yimuphi kadokotela noma ikhadi yezokwelapha e-United States. Uma kwelinye izwe, sicela uhlole imithetho yangakini. uthi abaningi baye baqala semthethweni CBD Amafutha kusukela Insangu; kanti ezinye izifunda bavotela phansi. Nakuba CBD kuyinto CBD futhi akunandaba noma ngabe kuvela insangu noma Hemp ukuze sibe abafundisi abaphumelelayo, ngoba insangu has izindaba zomthetho, CBD Amafutha kusukela Insangu anga noma angeke kube semthethweni esimweni sakho. Kodwa, maphakathi nedolobha Amafutha kusukela Hemp IS KWEZOMTHETHO kuzo zonke izifunda ezingu-50, kungakhathaliseki imithetho isimo sakho ku-insangu nensangu CBD Amafutha.
Will I aphase uhlolo lwezidakamizwa emva usebenzisa leyo mikhiqizo?
Siye ebhaliwe isihloko yonke ku-Blog yethu Page ngalokhu. Sicela uchofoze isihloko esilandelayo ukuze ubone: INGABE CBD umuntu ukuba HLOLA OMUHLE ON A IZIDAKAMIZWA-SCREEN?
Kungani-ke ayebiza kangaka?